Muslimiinta ku dhaqan magaalada Trowbridge,UK oo dadweenaha magaaladasi ku soo dhaweeyay masaajidka si ay u fahmaan diinta islamka .. | Faafan News
Muslimiinta ku dhaqan magaalada Trowbridge,UK oo dadweenaha magaaladasi ku soo dhaweeyay masaajidka si ay u fahmaan diinta islamka ..
Masaajid ku yaala magaalada Trowbridge ee dalka England ayaa albaabbada u furay dadweynaha aagaasi la dariska ah si ay u fahmaan Islamka islamarkaana bartaan wixii qalad ah oo ku saabsan diinta.
Kulanka oo dhaca bil kasta, oo la bilaabay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay, ayaa waxa kaso qeeb galay tiro badan oo dadka deegaanka iyadoo su’aalo badan ay waydiinayaan oo ku saabsan sida loo arko diinta inta badan lala xiriiriyo weerarrada argagixiso ee dhawaan.
Farzana Saker, oo xubin ka ah gudiga masaajidka ayaa sheegtay in ay rajaynayso in dad badan soo booqdaan sifa is faham la’aanta ku saabsan Islaamka iyo Muslimiinta loo saxo.
“Ujeedada loo balaqay ilbaabada waa in la siiyo fursad dadka si ay su’aalo ku saabsan masaajidka iyo gaar ahaan diinta wax badan uga fahmaan khaasatan duruufaha hadda jira iyadoo qalad aad u badan laga fahmay Muslimiinta,” ayay ku dartay
Maanta waxa ay noo aheed fursad aan ku hagaajineeno fahamka oo aan ka saarno kuwa fikrada khaldan iyo aragtida ay ka qabaan diinta iyo dadka islaamka.
“Marka masaajidka furmo, waxa uu u furanyahay bulshooyinka oo dhan si ay u buuxiyaan oo midna midka kale laga duwin , iyo sidoo kale wada shaqeeyaan.
Waxaan soo dhaweeyneena dhamaan dadka, sidoo kale waxa muhiim ah inaan faham u yeelano diimaha iyo dhaqamada kale.
” Intii lagu guda jiray kulanka, waxaa masaajidka so booqday dadka deegaanka, kooxaha bulshada iyo xubnaha golaha ee ka maqlay Kamel Jeddi oo hadal gaaban oo ku saabsan ka jeediyay sida wararka warbaahinta qaranka inta badan ay ku guuldareysteen inay sheegaan xukunka iyo waxa ay Muslimka ka qabaan weerarada argagixisada.